नेता भनेको अमृत अर्यालजस्तो विशाल छाती भएको हुनुपर्छ, शेखर कोइरालाजस्तो गुट चलाउने होइनः रायमाझी « रिपोर्टर्स नेपाल
नेता भनेको अमृत अर्यालजस्तो विशाल छाती भएको हुनुपर्छ, शेखर कोइरालाजस्तो गुट चलाउने होइनः रायमाझी
काठमाडौं, ८ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेशजंग रायमाझीले डा. शेखर कोइारालाले गुटको नाममा मोरङ र सुनसरीमा पार्टीका सिनियर मान्छेलाई विस्थापित गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता रायमाझीले भने, “डा. शेखर कोइरालाले गुटको नाममा मोरङ र सुनसरीमा पार्टीका सिनियर मान्छेलाई विस्थापित गर्न खोजेका छन् । त्यो महाधिवेशनमा काम लागे पनि भोलि संसदीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यस्तो गुटले काम गर्दैन । जो सधैंभरि गाउँमा बस्छन्, फिल्डमा खटिन्छन्, जनताको सामाजिक काम गर्छन्, कांग्रेसका लागि लड्छन् । तिनलाई हराएर को नेता हुन सक्छ ?”
शेखर कोइरालाले गुटको राजनीति गर्दा नै संसदीय निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको आरोप उनले लगाए । महाधिवेशन प्रतिनिधि हारेको झोक झिक्नुभएको हो भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले थपे, “म पराजित हुनु ठूलो कुरा होइन । म संसदीय निर्वाचनमा पनि पराजित भएको हुँ । अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छु । नेता हुने मान्छेले तपाईं यहाँ बस्नुस् भन्न सक्नुपर्छ । शेखर त एउटा गुट चलाएर हिँड्नुहुन्छ । हिजो संसदीय निर्वाचनमा शेखर पराजित हुनुभएको होइन ? उहाँ प्रचारमुखी हुनुुहुन्छ । मिडियामा भनेको कुराले मात्र पुग्दैन । नाराले मात्र पनि काम चल्दैन ।”
युवा नेताहरुले कहिले कोसँग टाँसिने, कहिले कोसँग टाँसिने गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, “युवा मित्रहरुले केन्द्रीय समितिमा गएर केके काम गर्नुभयो, मन्त्री भएर के काम गर्नुभयो ? प्रचार एउटा कुरा हो, काम अर्काे कुरा हो । काठमाडौंजस्ते सहरको राजनीति होइन, तराई, पहाडबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतालाई थाहा हुन्छ, जनताको काम ।”